26 fikrado abuurista niyadda Sannadka Cusub
1. U dir kaararka boostada saaxiibada magaalooyinka kale
Dooro kaadhadhka boostada leh mawduuca sanadka cusub, saxeex mid kasta oo u dir aduunka oo dhan. Ogaanshaha kaliya in farriinta warqad ku qorani ay degdeg ugu socoto saaxiibbadaa waa in aad raalli gelisaa oo ku dar 100 dhibcood rajada ciida.
2. Baro ama samee hees sanadka cusub
Barashada ereyada Jingle Bells, Christmas is All agagaarka, ama heeso kale oo Christmas iyo New Year ah oo aad maalin walba ku heesid guriga iyo wadada waxay kor u qaadaysaa niyaddaada. Oo markaad la timaado hees cusub, waxaad ka yaabin kartaa asxaabtaada.
3. Dubo buskud
Dhib ma laha haddii aad hore u samaysay iyo haddii kale. Soo ururi shirkad weyn, qaado cuntada ugu horreysa ee aad jeceshahay, oo tag!
Saaxiibada, ardayda fasalka ama koox saaxiibo ah ayaa ku fiican. Qoyska weyn? Fiican Go'aanso miisaaniyad oo u rog fikradahaaga: Sannadka Cusub, qof kastaa wuxuu rabaa wax asal ah. Waxaad ka ciyaari kartaa bogga Secret Santa.
Oo haddii aadan rabin inaad isticmaasho internetka, ciyaar offline. Hackers-ka nolosha ayaa ku soo ururiyay xeerarka maqaal gaar ah.
5. Iibso funaanadaha sannadka cusub
Habka wax iibsiga oo keliya ayaa madaxaaga ka buuxin doona fikrado diirran oo ku saabsan fasaxyada soo socda. Oo looma baahna in laga hadlo xidhashada!
Iibinta ugu wanaagsan sida Habeenka Kahor Kirismaska, The Polar Express, Sida Grinch uu u xaday Christmas-ka ayaa kaa caawin doona inaad la kulanto jawiga sanadka cusub. Ha iloobin bustaha iyo shukulaatada kulul!
7. Bilow tirinta
Hayso jadwal aad kaga gudbi karto maalmaha. Waxa ugu muhiimsan waa in rajada fasaxa aysan noqon mid aad uga farxisa fasaxa laftiisa.
8. Deji gidaarada sanadka cusub
Waxaan eegno shaashadda casriga ah ama kombiyuutarka marar badan marka loo eego muraayadda. Xaaladeena, waxaa habboon in laga faa'iidaysto: Waraaqaha waraaqaha sanadka cusub waxay ku dari doonaan jawiga sixirka noloshaada.
9. Iibso oo qurxi geedka kirismaska
Taladu waxa ay noqon kartaa mid fudud, laakiin waxa ay shaqaynaysaa 100%. Urta cirbadaha geedaha, sanaadiiqda alaabta lagu ciyaaro, gadashada ubaxyada iyo qurxinta, Sannadka Cusub ayaa si fudud u iman doona maalmaha soo socda! By habka, doorashada geedku waa farshaxan dhan.
10. Ku lugee waddooyinka waaweyn
Maamulku waxa uu qurxiyey magaalada oo kaliya in aan u bogan karno nalalka ka soo baxa muraayadaha baabuurta iyo basaska. Markaa qaado wakhti oo ku wareeg xarunta: si yaab leh ayay halkaas ugu qurux badan tahay!
11. U soo iibso hadiyado kuwa aad jeceshahay
Waa hab lagu farxo. Waxaa dheer, haddii aad degdegto, waxaad heli kartaa qiimo dhimis wanaagsan. Tani waxay sidoo kale kor u qaadaysaa niyadda.
Maxaa diidaya? Wax walba ma ka duwan yihiin? Waxaad wax siin kartaa qofka ugu muhiimsan oo la jecel yahay noloshan. Hadiyad yar laakiin wacan ayaa kuu iftiimin doonta rajadaada fasaxa.
13. Qaado gogosha sanadka cusub
Inaad seexato oo aad ka kacdo meelaha barafka, geedaha kirismaska ​​​​iyo alaabta lagu ciyaaro sanadka cusub waa wax lagu farxo. Waad hubin kartaa
14. Samee nin baraf ah
Xusuusnow caruurnimadaada oo qaado mid ka mid ah ciyaaraha firfircoon ee usbuuca soo socda. Markaad ku soo laabato guriga, miiska xafladu wuxuu noqon doonaa riyadaada, ugu yaraan ilaa cuntada fudud ee xigta.
15. dukaameysi tag
Xarumaha wax iibsiga ee habeenka sanadka cusub, oo kaliya jawharad! Wax kasta oo iftiimaya: gidaarada, saqafka, daaqadaha dukaanka. Sannad cusub oo leh dhar cusub! Sideed u jeceshahay halku-dhiggan?
16. Samee qurxinta Christmas-ka
Xayawaanka mar hore ayaa la soo iibsaday, laakiin miyuu kaliya lagu qurxiyey kubbadaha IKEA? Maaha doorashadayada.
17. Iyo dharka sanadka cusub ee ilmaha
Oo hadda hawshu aad ayey u adag tahay: si loo hubiyo in ilmuhu yimaado fasaxa dharka ugu xiisaha badan.
18. Warqad u qor Santa Claus
Haddaba waa maxay, maxaa muddo ka badan labaatan! Santa Claus waxa uu leeyahay boosto u gaar ah. Ciwaankana waa: 162390, Russia, Vologda region, Veliky Ustyug, Aabbaha Frost's Mail.
Ma jiraan xeerar gaar ah. Kaliya qor warqad, ku dheji shaambada, oo ku rid sanduuqa boostada. Ka dibna sugo mucjiso. Maxaa dhacaya haddii Santa Claus uu akhriyo warqadda oo uu fuliyo rabitaankiisa?
19. Iibso Koofiyadda Santa
Haddaba waa maxay? Qaar badan ayaa tan sameeya. Ma eegi karo awoowga sixirka, adigu mid noqo.
20. Diyaarso fadhi sawir ah
Waxay la shaqeysaa bang Jawiga istuudiyaha sawir kasta ayaa ka dhigi doona xitaa kuwa neceb inay rabaan sanadka cusub. Intaa waxaa dheer, kuwani waa sawirro xusuus leh, had iyo jeer waa farxad in la helo.
21. Dhageyso muusiga
Malaha waxaad u malaysay inaan ilaawi doonno, laakiin maya! Muusigu wuxuu u shaqeeyaa yaabab, sidaa darteed liiska heesaha sanadka cusub waa lama huraan si loo abuuro loona ilaaliyo niyadda sanadka cusub.
22. Ku hareeree naftaada udgoonka sanadka cusub
Mise jiilaal uun. Tangerines, qorfe, anise, toon, cirbadaha geedaha, urtaas ayaa hubaal ah inay xasuusin doonaan sheekooyinka carruurnimada ee sanadka cusub, iyo niyadda diiran ayaa la dammaanad qaaday.
23. Gurigaaga qurxi
Taas la'aanteed, sidoo kale, meelna ma jirto. Nolosheenna kala badh ayaynu ku qaadanaa shaqada (sida, waxaanu sidoo kale kugula talinaynaa qurxinta goobta shaqada), badhna guriga. U ogolow fasax nagu sugo guriga, markaa niyadda ayaa isku mid noqon doonta.
24. Daawo filimada sanadka cusub
Tani waa qayb muhiim ah oo ka mid ah u diyaargarowga ciidaha. Shirkad raaxo leh oo saaxiibo ah, bustayaal, wax kasta oo aad u baahan tahay fiidkii diiran ee jiilaalka si aad u bilawdo tirinta maalmaha ilaa sanadka cusub iyo kirismaska.
25. is ilaali
Manicure-ka sannadka cusub ama timo-jaridda cusub ayaa ka farxin doonta gabadh kasta. Ragguna waxay aadi karaan goob timo-jare ah.
26. Qorshee sanadka cusub
Waxa aad maalgeliso waa waxa aad filayso. Haddii aadan weli sameynin, aan qorsheyno menu-ka, barnaamijka, hadiyadaha iyo dhammaan habeenka sanadka cusub ee maanta.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, 26 fikrado abuurista niyadda Sannadka Cusub!